Ramón Gómez de la Serna: nke greguerías na igwe ihe ọkụkụ ndị ọzọ | Akwụkwọ ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akụkọ ihe mere eme, Akwụkwọ
Ramón Gómez de la Serna bụ onye ode akwụkwọ ama ama ama na onye Spain, nke a na-ewere dị ka otu n'ime ndị kacha mkpa na-akọwapụta asụsụ Spanish. Ejiri ụdị pụrụ iche na enweghị nkwanye ugwu mara ya; nye ya nguzobe ụdị nke "las greguerías" nwere ụgwọ. Site n'ụdị ederede ndị a na -atụghị anya ha, onye ode akwụkwọ wepụtara ọtụtụ akwụkwọ, nke a na -ewere dị ka mmalite mmalite nke ịrara onwe ya nye; n'etiti ndị a dị mkpa: Asụsụ Greguerías (1917) na Total nke greguerías (1955).
Agbanyeghị na greguerías ya nyere ya nkwado, ha nwekwara Ọ kwụpụrụ iche maka mbipụta akwụkwọ akụkọ 18 - nke nwere nkọwa akụkọ ifo nke ndụ ya -. Nke mbụ bụ La onye isi ojii na oji (1917), akụkọ nke asịrị na enwere nkọwa nke mmekọrịta ya na Carmen de Burgos. N'ịbụ onye a chụgara na Buenos Aires, o bipụtara otu n'ime akwụkwọ akụkọ ndụ ya kachasị mkpa: Akpaaka (1948).
1 Nchịkọta akụkọ ndụ nke Gómez de la Serna
1.1 Ọrụ edemede mbụ
1.2 Magazin Prometheus
1.3 Okike nke "las greguerías"
1.4 Ọnwụ Gómez de la Serna
2 Akwụkwọ ụfọdụ Ramón Gómez de la Serna dere
2.1 Nwanyị di ya nwụrụ nke oji na ọcha (1917)
2.2 Onye na -adabaghị (1922)
2.3 Nwanyị Amber (1927)
2.4 Onye Knight of Mushroom (1928)
2.5 Ịnwụ Onwe Onye (1948)
Nchịkọta akụkọ ndụ nke Gómez de la Serna
Na Tuesday July 3, 1888 - n'obodo Rejas, Madrid - amụrụ Ramón Javier José y Eulogio. Ndị mụrụ ya bụ onye ọka iwu Javier Gómez de la Serna na Josefa Puig Coronado. N'ihi agha Spanish na America (1898), ezinụlọ ya kpebiri ịkwaga Palencia. Na mpaghara ahụ ọ malitere ọmụmụ ya n'ụlọ akwụkwọ Piarist nke San Isidoro.
Afọ atọ ka e mesịrị, a họpụtara nna ya ka ọ bụrụ osote onye isi Liberal. N'ikpeazụ, Ha laghachiri Madrid, ebe Ramón gara n'ihu na -azụ ọzụzụ na Instituto Cardenal Cisneros. Na 1902, mgbe ọ dị afọ 14, ọ malitere ibipụta El Postal, Magazin Nche maka ikike ụmụ akwụkwọ, magazin nwere ihe osise na ihe odide dị iche iche e ji aka dee.
Mgbe ọ gụchara ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ debanyere aha na ngalaba nke Iwu - n'agbanyeghị na ọ nweghị mmekọ maka ọrụ ahụ. Na 1905, na ekele nna ya nyere ya, o bipụtara akwụkwọ mbụ ya: Ịga n'ọkụ. N'ime afọ 1908, ọ gara n'ihu na -amụ ihe gbasara iwu na Mahadum Oviedo. N'otu aka ahụ, ebe ọ na -agụsi agụụ ike ide ihe, o bipụtara n'otu afọ ahụ ọrụ nke abụọ ya: Ọrịa.
N'oge mmalite ya dị ka onye edemede, Gómez de la Serna tinyere aka na nta akụkọ; ebe ahụ o gosipụtara mmalite ya, e ji mara ịkatọ ọha mmadụ. Mepụta nyocha Prometheus, nke o dere n'okpuru pseudonym "Tristán". Akwụkwọ ndị o mere na usoro ahụ kwadoro ụkpụrụ nna ya. A na -akọcha ya nke ukwuu maka edemede ya, a tụlere ya: “… iconoclast, anarchist nke akwụkwọ ozi, onye nkwulu”.
Okike nke "las greguerías"
Ndị a bụ akwụkwọ edemede pụrụ iche, nke sitere na mbido, ọgụgụ isi na mkpebi siri ike. Ọ na -ebipụta ha na 1910 wee kọwaa ha dị ka "ihe atụ tinyere ọchị." Ha bụ, n'ime onwe ha, okwu mkparị dị mkpụmkpụ nke na -ekpughe ọnọdụ ebe obibi site n'iji okwu njakịrị na ọchị. Iji mee nke a, o jiri eziokwu ndị a na -adịghị ahụkebe, ederede mara mma ma ọ bụ egwuregwu echiche.
Ọnwụ Gómez de la Serna
Nkwupụta sitere na Ramón Gómez de la Serna
N'ime ndụ ya niile, onye ode akwụkwọ ahụ wuru akwụkwọ akụkọ siri ike nke nwere akwụkwọ akụkọ, edemede, akụkọ ndụ na ihe nkiri. Ederede ya abụrụla ihe atụ nye ọgbọ ndị sochirinụ. Ndị nkatọ na -ewere ya na ọ bụ otu n'ime ndị edemede Spain ama ama. Mgbe agha agha nke 1936 gasịrị, Gomez nke Serna kwagara Argentina, ebe o bi ruo ọnwụ ya na Jenụwarị 12, 1963.
Akwụkwọ ụfọdụ Ramón Gómez de la Serna dere
Nwa nwanyị di ya nwụrụ na onye ọcha (1917)
Ọ bụ akụkọ gbasara mmụọ nke dị na Madrid. O nwere mkpụrụ edemede abụọ: Rodrigo hedonist na Cristina nwanyị di ya nwụrụ. Otu ụbọchị, nwoke ahụ gara uka wee na -echegbu onwe ya maka otu nwanyị enigmatic nke ga -ekwupụta mmehie ya. Mgbe ọ ghọsịrị nwanyị ahụ, a ga -akwụghachi ya, obere oge ka e mesịrị ha malitere ihunanya. Site ebe ahụ, Rodrigo wepụtara onwe ya ileta Cristina n'ụlọ ya kwa ehihie.
Nwaanyị -ngwaahịa ọnyá ya gara aga alụmdi na nwunye- aghọọla onye gbara ọchịchịrị. Rodrigo ghọtara ya, n'ihi ya, izute mgbe nzukọ gasịrị, ọ malitere ịtụ egwu. Nke ahụ bụ ọnọdụ ya, nke ahụ ntule batara nwoke ahụ n'ihe kpatara di ya nwụrụ. Ihe a niile mere ka a na -enyo enyo n'uche mebiri ya, na -eme ka obi ghara iru ya ala na obi abụọ.
Nwaanyị di ya nwụrụ na onye isi ...
Ihe na -adabaghị (1922)
Na akụkọ a E gosipụtara ọtụtụ akụkọ ndụ Gustavo, onye emetụtara ihe a na-akpọ ihe ọjọọ nke narị afọ: "ekwekọghị ekwekọ”. Nke a bụ nwa okorobịa amụrụ n'oge na -akabeghị aka na ọnụnọ ya nwere njirimara mara mma. Ihe a na -ahụkarị na ịdị adị ha bụ mgbanwe mgbe niile, n'eziokwu, kwa ụbọchị ha na -enweta ụdị akụkọ dị iche iche. Ọ na -enye echiche na ọ bụ nrọ, eziokwu na -enweghị isi nke a na -achọ ịhụnanya mgbe niile.
Ọrụ a pụrụ iche, a na -ewerekwa ya dị ka ihe na -ebute ụzọ nke ụdị ịrara onwe ya nye, ebe ọ bụ na e bipụtara ya tupu ngosi izizi na ọrụ Kafka. Ọ bụ ederede nke akọwara amamihe nke ọma; Àgwà ya gụnyere oge a, uri, ọchị, ọganihu na ihe mgbagwoju anya. Akụkọ a nwere ederede mmeghe nke Julio Cortázar raara nye onye ode akwụkwọ, ebe ọ na -ekwusi ike: "mkpu mbụ nke nzere na akwụkwọ akụkọ ifo."
Ihe na -adabaghị
Nwanyị Amber (1927)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi nke edobere na Naples, dabere na ahụmịhe onye ode akwụkwọ n'obodo obodo Italy ahụ. Edere ederede na onye nke atọ na na -akọ akụkọ Lorenzo, nwoke si Palencia nke gara obodo Neapolitan wee zute Lucia. Enwere m mmasị ozugbo, ha abụọ na -ebi mmetụta na -adịghị agwụ agwụ n'etiti ịhụnanya. Agbanyeghị, ezinụlọ Lucía jụrụ mmekọrịta ahụ, n'ihi na otu n'ime ndị nna nna ya nwụrụ n'ihi onye Spain.
Nwanyị Amber. [N'elu ...
Onye isi nke ero isi awọ (1928)
Ọ bụ akụkọ n'ụdị serial nke na -ese Leonardo, nwoke nwere mmasị na ya. Nwoke a, n'ihi ọrụ mpụ ya, na -agba ọsọ, na -awagharị n'obodo dị iche iche na Europe. N'otu n'ime njem ndị a, ọ bịarutere Paris, banye na bazaa wee hụ okpu isi ụcha isi awọ; masịrị ya, ọ zụrụ ya. Mgbe ị na -apụ n'ụlọ ahịa ahụ, ị ​​na -achọpụta na ndị mmadụ na -ahụ gị n'ụzọ dị iche, dị ka a ga -asị na ị bara ọgaranya.
Kemgbe ahụ, Leonardo kpebiri iji okpu onye na -agba bọọlụ wee na -aga nzukọ ọha mmadụ dị elu iji mee wayo ya. Maka ya, ihe a dị mfe aghọọla ọchioma na -enye ya ohere ime ihe ọjọọ ya n'ọkwa dị elu.
Onye na -ahụ ero ero ...
Ọ bụ ọrụ onwe onye onye ode akwụkwọ mere na ọha na Argentina na afọ 70. Ndị na -akatọ oge ahụ na -ewere ya dị ka ọrụ kacha mkpa. Ederede na -akọwa oge afọ 60 nke ndụ ya (n'etiti 1888 na 1948). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ peeji 800 nwere foto na atụmatụ ndị Spanish mere. Ọ bụ akụkọ ntorobịa ya, ndụ ya dị ka onye edemede na otu o si mee agadi n'amaghị ama.
N'okwu mmalite ya, onye edemede kwuru, sị: “Naanị m tụpụtara mgbe m na -emeju akụkọ ndụ m iji nye mkpu nke mkpụrụ obi, chọpụta na m dị ndụ nakwa na m na -anwụ anwụ, teta nkughari ka imata ma enwere m olu. Akọnuche m enweela ahụ iru ala na ahụ iru ala mgbe m dechara akwụkwọ a, nke m na -eburu ibu ọrụ niile nke ndụ m ”.
Ọnwụ nkeonwe 1 ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Ramon Gomez de la Serna